Stocker Oche - Imewe Mmewe
Oche Onye na-ere ahịa bụ ngwakọta dị n'etiti oche na oche. Ogwe osisi nwere oghere dị mma maka ebe obibi na ebe ana - arụ ụlọ. Expressdị ya na-egosiputa mma nke osisi dị n’obodo. Ihe omimi ihe omuma nke ulo a na ewusi ya ike dika 8 mm nke 100 site n’osisi siri ike meputa ihe siri ike mana ihe nlere buuru ihe dika 2300 Gramm. Ejikọtara ọnụ nke Stocker na-enye ohere ịchekwa ohere. Na-arapara n'ahụ ibe ya, enwere ike idobe ya ngwa ngwa na n'ihi usoro okike ya, enwere ike ịkwado Stocker kpamkpam n'okpuru tebụl.
Aha oru ngo : Stocker, Aha ndị na-emepụta ya : Matthias Scherzinger, Aha onye ahịa : FREUDWERK.
Ngwongwo, ihe eji achọ mma na ihe eji eme ulo
Oche Matthias Scherzinger Stocker